News Collection: छोरीको विहेमा भुवनको काइदा !
छोरीको विहेमा भुवनको काइदा !
अभिनेता भुवन केसी पछिल्लो समय जेठी छोरीको विहेलाई लिएर चर्चामा छन् । आगामी मंसिर दोस्रो साता भुवन पुत्री काजोलको विहे हुँदैछ । काजोल दसैंदेखि सिनामंगलस्थित भुवनकै घरमा छिन् जो टीका थाप्न दसैंअघि काठमाडौं आएकी थिइन् । नेपालीमूलका अमेरिकी एक युवकसँग विहे गर्न लागेकी काजोलको यसअघि नै अमेरिका रहँदै इन्गेजमेन्ट भैसकेको छ ।
खासगरी उट्पट्याङ कामले गसिपका पात्र बनिरहने भुवन यतिबेला सिनेमाभन्दा छोरीको विहेको तयारीमा व्यस्त छन् । रोचक कुरा त, भुवनको घरबाटै धुमधामपूर्वक बाजा बजाएर उक्त विहे हुँदैछ । वर्षौंअघि डिभोर्स भैसकेकी पत्नी विजया केसीतर्फकी छोरीलाई आफ्नै घरबाट विहे गरेर पठाउन लागेको कुराले धेरैजनाको ध्यान खिचेको छ । काजोललाई आफ्नै घरबाट विहे गराउने भुवनको योजनालाई धेरैले जेठी पत्नीसँग नजिकिने उपायका रुपमा बुझेका छन् ।
कान्छी पत्नी सुस्मितसँगको विच्छेदपछि पनि भुवन छोरा अनमोलसँगै रहँदै आएका थिए । जेठी पत्नी विजया लामो समयदेखि अमेरिकामा रहँदै आएकी छिन् । विजय कुनै समय नेपाल टेलिभिजनमा अंग्रेजी समाचार बाचन गर्थिन् । छोरीको विहेका लागि विजय काठमाडौं आउने÷नआउने निश्चित छैन । तर, डिभोर्स भैसकेकी श्रीमतीकी सन्तानलाई घरबाटै कन्यादान गर्ने भुवनको योजनामा कतै विजया नजिक हुने मेसो त लुकेको छैन ?